IHuawei iya kuqala ukuvelisa iiyunithi ezingama-100.000 zeHuawei Mate X | I-Androidsis
IHuawei iya kuqala ngokusungula iiyunithi ezingama-100.000 zeHuawei Mate X
Ngenxa yemicimbi yescreen kwiGolden Fold, ukumiliselwa kwayo kulibaziseke ngokungapheliyo, IHuawei Mate X iya kuba yeyokuqala ukusonga ifowuni ukuyazisa kwintengiso. Inkampani ngokwayo ikuqinisekisile oko khange balibazise ukumiliselwa kwesixhobo. Ke ngoko, sinokulindela ukuba izakwaziswa kwihlabathi liphela phakathi NgoJuni nangoJulayi. Kancinci kancinci sifunda ngakumbi malunga nolusungulo.
Ukusukela uphawu lwaseTshayina luceba ukuvelisa iibhetshi ezahlukeneyo zale Huawei Mate X. Into esengqiqweni, kuba imveliso iya kuxhomekeka kwinxalenye yokwamkelwa kwemakethi. Isitokhwe sokuqala sefowuni yophawu iya kuba ziiyunithi ezingama-100.000, njengoko kusaziwa njalo, ukuba baya kuba belungile ngoJulayi.
Ngoko ke kweli hlobo kuza kubakho ukuthenga le Huawei Mate X ngokusemthethweni. Nangona sisalinde ukuba kubekho ubungqina obusemthethweni kulwaziso oluthile. Imveliso yokuqala yefowuni iphezulu kunaleyo yayixeliwe ekuqaleni kweminye imithombo yeendaba.
Ukuza kuthi ga ngoku akucaci ukuba zingaphi iiyunithi zesixhobo eziya kwenziwa. Isamsung iceba ukuvelisa isigidi esinye Iiyunithi zeGolden Fold, njengoko besitsho kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Kwimeko yeHuawei, kucingelwa ukuba imveliso yayo inokuba sezantsi kakhulu, ngenxa yescreen.
Kule meko, kunokubakho malunga neeyunithi ezingama-300.000 zeHuawei Mate X. Le yinto esele ichaziwe kwimithombo yeendaba. Oko ngokuqinisekileyo kuya kuba yimveliso esezantsi ngokubonakalayo kunokuba sithelekise nefowuni yeSamsung. Kodwa kuya kufuneka ulinde ukuba kubekho ubungqina obuvela kumenzi malunga noku.
Akuthandabuzeki Le Huawei Mate X ithembisa ukuba ngumnxeba obaluleke kakhulu umenzi waseTshayina. Isixhobo esitsha, kodwa ayizukuba lula kwintengiso, ngenxa yexabiso laso eliphezulu, elibiza kakhulu kuneGold Fold. Ucinga ntoni ngale fowuni? Ngaba ucinga ngokuthenga xa isungulwa kwimarike?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei iya kuqala ngokusungula iiyunithi ezingama-100.000 zeHuawei Mate X
Ithetha ntoni into yokuba ifowuni ye-Android iqinisekiswe nge-IP68?
I-Sony isayina ukuthengisa kwayo okubi kakhulu kwikota yokuqala